i-Caseboard, ny fitendry backlit ary amin'ny Espaniôla ho an'ny iPad | Vaovao IPhone
Manolotra anao izahay i-Caseboard, fitendry iray natao manokana ho an'ny iPad Air Izy io dia manana endri-javatra maromaro izay mampiavaka azy amin'ireo maodely maro hafa hita eny an-tsena, izay ahafahantsika manasongadina ny fanatsimbadihan'ny lakile, zavatra iray izay ankoatry ny maha-azo ampiharina mba hahafahana manoratra am-pitoniana nefa tsy manelingelina ny mpiray efitrano mampirehitra jiro. manome izany sentetika tena manintona. Raha mitady keyboard hafa ianao izay mamadika ny iPad Air ho zavatra mitovy kokoa amin'ny Macbook Pro, i-Caseboard no vahaolanao ary izao koa miaraka amina tolotra tena manintona.
i-Caseboard dia fitendry izay mifanaraka amin'ny Bluetooth 3.0, izay mamela ny fampifanarahana azy amin'ny iPad Air ho tena tsotra, tsy mila manoratra kaody. Tena kitendry Plug & Play izy izay misaotra ny klavian'ny Espaniôla, miaraka amin'ny «Ñ» ary ny rehetra, dia hahafahanao manoratra tsara amin'ny iPad anao. Ny fizakantenany dia hatramin'ny fampiasana 100 ora ary afaka mankafy fiampangana feno ianao ao anatin'ny adiny roa fotsiny. Izy io dia manana bokotra manokana ka tsy mila mampiasa ny bokotra ara-batana amin'ny iPad ianao, toy ny fanaraha-maso ny volume na ny bokotra an-trano ahafahanao mivoaka ny solaitrabe na miditra amin'ny bara marobe amin'ny alàlan'ny fanindriana azy indroa. Araka ny efa nolazainay teo aloha, ny fihemorana ny lakile dia zavatra azo ampiharina ary azonao atao koa ny manamboatra azy amin'ny alàlan'ny fisafidianana ireo loko 7 atolony. Ny jiro fitendry dia azo fehezina amin'ny hery telo samy hafa.
2 Tombontsoa sy lafy ratsy
Kitendry I-Caseboard ho an'ny iPad Air
Famerenana ny: Vaovao IPad
Ny kalitaon'ny fitaovana
Kasikasa tsy resy
Kitendry Espaniôla misy fanalahidy ñ
Azonao atao ny mahita ny i-Caseboard ao Electromedia amin'ny vidiny manokana € 59,95 (ny vidiny mahazatra dia 89,95 €) miaraka amin'ny vidin'ny fandefasana. Io sanda io dia voafetra amin'ny singa 100, ary raha te hahazo izany dia mila mampiditra ny kaody "icaseair" amin'ny tranokala amin'ny fotoana fividianana ianao. Fanomezana mahafinaritra ho an'ity Krismasy ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » i-Caseboard, ny fitendry backlit amin'ny teny espaniola ho an'ny iPad
Carlos Calle dia hoy izy:
Misy mahalala raha mifanaraka amin'ny iPad Air 2 izy io?
Valiny tamin'i Carlos Calle
Ny fampiharana Twitter ho an'ny iOS dia efa mampiseho ny statistikan'ireo bitsika nalefanay
Ahoana ny fomba hamahana ny olan'ny Wifi ao amin'ny iOS 8- iOS 8.1.2